Qaladaadkii Sababta U Noqday Guul-darradii Liverpool Ee Jurgen Klopp Uu Sameeyey Kulankii Xalay Ee Real Madrid | Laacibnet.net
HomeWararka Champions LeagueQaladaadkii Sababta U Noqday Guul-darradii Liverpool Ee Jurgen Klopp Uu Sameeyey Kulankii Xalay Ee Real Madrid
Qaladaadkii Sababta U Noqday Guul-darradii Liverpool Ee Jurgen Klopp Uu Sameeyey Kulankii Xalay Ee Real Madrid
Rajada Liverpool ee xilli ciyaareedkan ayaa ku xidhan natiijada ay ka keenaan kulanka lugta labaad ee garoonkooda Anfield ay ku qaabbili doonaan Real Madrid toddobaadka dambe kaddib markii xalay 3-1 lagu soo garaacay ciyaartii ay martida u ahaayeen Los Blancos.
Reds ayaa rajaynaysay in ay sii wadan doonto qaab ciyaareedkii ay soo bandhigtay kulankii Arsenal ee horraantii toddobaadkan, laakiin bandhig bahdilaad ah oo ay la yimaaddeen qaybtii hore ayaa sababay in Real Madrid ay si fiican u shaqaysato, isla markaana laba gool dhashato.
Xiddigaha Liverpool ayaa qaybta hore ahaa kuwo aan isla haysanin oo aanay jirin meel ay ku fiican yihiin, waxaana laga qabsaday khadka dhexe, halka difaaca midigna uu Vinicius Junior ka dhigtay waddo uu iska leeyahay.
Goolka hore ayuu Toni Kroos kubadda kasoo tuuray goolkiisa agteeda, waxaanu xabbadka u saaray Vinicius Junior oo difaaca Reds orod ugu awood sheegtay, halka uu goolka labaadna ku yimid qalad uu sameeyey Trent Alexander-Anrold oo kubad uu doonayay in uu goolhayaha u dhiibo uu dhexda ka qabsaday Marco Asensio.
Diogo Jota ayaa jawaab aan sii soconin bixiyey oo kubbad uu difaaca lasoo dhex-qaaday ku toogtay goolka Madrid, hase yeeshee uu Salah qabsaday, goolna u beddelay.
Vinicius Junior ayaa dilay rajadii gashay Reds, waxaanu mar kale goolhaye Alisson dhaafiyey kubbad dhulka socota oo uu si sahlan ugu looxiyey goolka.
Tababare Jurgen Klopp ayaa qaladaad waaweyn sameeyey ciyaartan, waxaana saddexdii ugu mudnaa oo aanu soo qaadanay ay kala yihiin:
Thiago oo uu kaydka dhigay, kana doortay Keita
Markii shaxda kooxda laga waayey Thiago Alacantara, layaab ayay ku noqotay qof walba, sababtuna waxay tahay in uu laacibkan reer Spain qaab ciyaareed wanaagsan muujiyey kulankii Arsenal ee sabtidii iyo arrinta kale oo ah in uu khibrad u leeyahay ciyaaraha Spain oo uu kulamo badan ka hor tegay Real Madrid waqtigii uu joogay Barcelona.
Si kastaba, Klopp ayaa ka doortay Naby Keita oo ka garab ciyaaray Fabinhyo iyo Wijnaldum, waxaana uu laacibkani la yimid ciyaar liidata, isagoo awoodi waayey in uu kubadda jiido, baas fiican bixiyo, sidoo kalena shaqo difaac qabto.
Thiago iyo Fabinho waxay dhexda dambe kasoo wada bilaabaan dhismaha kubadda, balse Naby taas ma lahayn, waxaana uu Klopp qaladkiisa saxay qaybta hore oo sii dhamaanaysa oo uu beddelay Naby, isla markaana keenay Thiago.
Toni Kroos ayaa kubadda ku raaxaysanayay isagoo khadka dhexe taagan, waxaana iyadoo ay kubaddu hortiisa taallo uu daraasaynayay garoonka oo uu marba dhinac eegayay, waxaanu u tuurayay halka ugu habboon.
Labada gool ee hore ee kooxdiisa, waxa uu kubadda kasoo tuuray meel fog.
Halka ay Los Blancos sidan u ciyaaraysay, Liverpool waxa kaydka u fadhiyey laacibka reer Brazil ee Roberto Firmino oo shaqada ugu badan ka qabta khadka dhexe, isagoo isku daya in uu kubadda ka qaado dhexda oo uu ciyaarsiiyo garbaha weerarka ee Mane iyo Salah.
Firmino ayaa sidoo kale caawiya difaacyada marka ay kubaddu ka lunto, waxaanu kusoo noqdaa dhexda dambe isagoo isku daya in uu kubadda dib usoo xoogsado, halka Jota uu la mid yahay Mohamed Salah oo aanu shaqo ku lahayn kubad soo dhicinta.
Qalad kale oo Klopp uu sameeyey ayaa ahayd in uu dhayalsi sameeyey markii waqti dambe ay soo baxday in Real Madrid uu ka maqnaanayo Raphael Varane, horena uu uga maqnaa Ramos, taas darteed ayuu dhayalsi dhinaca difaaca ah ka sameeyey tababaruhu, waxaanu keenay Jota si uu uga faa’iidaysan karo Nacho iyo Militao oo diciifnimo uu u tirinyay.
Difaacii kala daadsanaa
Haneen adag ayay ku ahayd Ozan Kabak, waxaanu ku dhibaatooday sidii uu u joojin lahaa Vinius Junior iyo Marco Asensio oo ka daba baxayay.
Kalidii ma ahayn, ee waxa sidoo kale bandhiggiisu liitay Alexander-Arnold oo ay dhinaciisa ka imanayeen kubbadaha ugu badan.